Dhaqan Jirjiroole. W/Q: Cali Cabdi Coomay | WAJAALE NEWS
Dhanka wanaag marka laga joogsado, waa madaale karti badan awoodna u leh in uu dhawr cisho shaqeeyo nasasho la’aan, iyada oo aan marnaba laga dareemayn habyaraatee wax daal ah. Waa hadal-yaqaan ilaahay ku manaystay xus iyo xusuus xad-dhaaf ah, hibona u leh in uu aragtidiisa bulshada u sharaxo, sidoo kalena beerlaxawsan kara. Maaha kaba qaad u sujuuda madaxda xilka haysa, wuxuu ku qancsan yahay waxa ilaahay u qoray in uu meelna ku seegayn, helina doona goor ay ahaataba. Waa bulshaawi aanay habayaraatee jirin islaweyni, kibir, aftaag iyo fatoosh. Kuna dedaala qof kasta in uu qaabilo oo uu dhegaysto, islamarkaana qanciyo.